Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: 4 Qandaraasle oo Itoobiya Kabaxsatay.
Deg Deg: 4 Qandaraasle oo Itoobiya Kabaxsatay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay baxsadeen 4 kamid ah dadkii lagu eedeeyay in ay musuq maasuqa baahsan ku lug lahaayeen.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa wadanka dibadiisa ubaxsaday 4 qandaraasle oo maxkamad kusheegta wayaanuhu ay kuxukuntay xabsiyo kala duwan kadib markii sida lasheegay lagu helay lunsashada 86 milyan oo Dooller oo kamid ah lacagta shacabka.
Qandareesle yaashan baxsaday ayaa magacyadooda lagu sheegay Samuel Teklay, Gemshu Beyene, Deniel Mamo, iyo Zakir Ahmed. Xubnahan 4ta ah ayaa lasheegayaa in ay hantidan isla dhaceen gudoomiyaha Hay’ada dhismayaasha ee Itoobiya Zaid Woldegabriel oo isagu hadaba xabsiga kujira.
Dad udhuun duleela arimaha siyaasada ee Itoobiya ayaa sheegaya in xubnahan baxsaday ay xidhiidh dhaw lahaayeen Raysal Wasaaraha Gumaysiga Itoobiya Hailemariam Desaleng, waxaana lasheegayaa in ay xidhiidh aad udhaw lahaayeen.
Sidoo kale qaar kamid ah saraakiisha wayaanaha ayaa sheegaya in ay baxsadka xubnahan ladoondoonayay fududeeyeen saraakiil dhinaca socdaalka qaabilsan oo sida lasheegayo ufududeeyay in ay dalka si fudud uga baxaan.
Wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa umuuqda meel ay bililigadu caadi kanoqotay, waxayna dharaar iyo habeenba saraakiisha wayaanuhu tartan ugu jiraan boobka hantida umada, waana mid kamid ah calaamadaha lagu garto burburka.